Intsingiselo yeYALIS - IsiXeko saseZhongshan YALIS Iimveliso zeHardware zeMveliso Co, Ltd.
Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd. yasekwa ngo-2009, kwaye ibekwe eXiaolan Town, Zhongshan City, nto leyo eyaziwa ngokuba China Hardware Products Industry Base. I-YALIS ngumvelisi wokuphatha ucango odibanisa i-R & D, imveliso kunye nentengiso.
I-YALIS okwangoku inesiseko semveliso esigubungela indawo engama-7,200㎡, enomhlaba opheleleyo wefektri phantse i-10,000㎡ kunye nangaphezulu kwe-100 labasebenzi. Kwi-2020, i-YALIS iyakucwangcisa kwakhona ukwakhiwa komzi-mveliso, kubandakanya ukwaziswa kwenkqubo yolawulo lwe-ISO, uhlengahlengiso lolwakhiwo lombutho wemveliso, ukuqesha abasebenzi bezobuchwephesha kunye nokongeza izixhobo zemveliso ezizenzekelayo kwimigca eyahlukeneyo yemveliso. Kulindeleke ukuba isityalo sandiswe kwaye sisetyenziswe kwisithuba seminyaka emithathu.
Ngokunyuka kweengcango ezingabonakaliyo, isakhelo sealuminium iingcango zomthi, iingcango zangaphakathi zomthi, iingcango zesilayidi ezincinci kunye nezinye izisombululo kwimarike, i-YALIS iphumeze ngokulandelelana izibambo zeminyango kunye nesakhelo esincinci sezibambo zeglasi ngelixa kugcinwa isiphatho sokuqala somnyango we-zinc. umgca wemveliso.
Ngenxa yohlaziyo lwemveliso, igumbi lokubonisa leYALIS liphinde lahlengahlengiswa. Yahlulahlulwe yangamacandelo ama-5, indawo yemiboniso yesicelo sehardware, indawo yokubonisa iimveliso, indawo yokubonisa yeemveliso eziqhelekileyo, indawo yesisombululo somnyango wezinto zokwakha kunye nenqanaba lendawo yokuthengisa ipropathi, ebonisa ngcono ukusebenza kweentsimbi zomnyango emnyango kwaye zinike abathengi ngcono amava.
Kukho iintlobo ezininzi zeenkampani okanye abavelisi kumzi mveliso wokubamba iminyango:
Eyokuqala kukulinganisa uyilo lwezinye iinkampani okanye abavelisi. Iimveliso zeenkampani ezinjalo okanye abavelisi abanazinto zoyilo kunye nesakhono sokuphuhlisa iimveliso ezintsha.
Okwesibini ziinkampani okanye abavelisi ikakhulu ababonelela ngeengcango zealuminium, izibambo zentsimbi ezingenanto okanye izibambo zentsimbi. Ezi ntlobo zemveliso zithathelwa ingqalelo ikakhulu njengezi: ubungakanani obukhulu, ubuntununtunu kumaxabiso, kwaye azidingi kuphuhliswa kwemveliso kunye nezinto ezintsha.
I-YALIS, umenzi wezinto zokucoca i-zinc alloy kunye neengcango zeminyango, hayi kuphela ngemveliso yophuhliso lweentlobo ezahlukeneyo zabathengi kunye neminyhadala yesicelo somnyango, kodwa kunye nentengiso kunye nokwazisa amandla kwintengiso eyahlukeneyo.
Okwesithathu luphawu oluphambili lwase-Itali. Iimveliso zazo ubukhulu becala zenziwe ngobhedu. Uhlobo lwabo lonwabela udumo oluphezulu kakhulu kwihlabathi liphela. Nangona kunjalo, iimveliso zabo zinokubakho kwinani elincinci labathengi-- abathengi bexabiso eliphambili.
Kwi-2020, i-YALIS izakuthatha ezi zicwangciso zimbini zokwenza uphawu kwihlabathi liphela kunye nemveliso esizisebenzelayo njengowona mgaqo uphambili wophuhliso. Kwelinye icala, iya kuzibeka njengomboneleli wesisombululo somnyango weentsimbi. Ukuthatha i-China njengeyona nto iphambili, ukwandisa ukuya eYurophu, kuMazantsi mpuma eAsia, kuMbindi Mpuma nakwamanye amazwe, kunye nokuseka iqela lenkonzo yabathengi ukusombulula iingqaqambo zabenzi beminyango nabasasazi bamanye amazwe. Kwelinye icala, umzi-mveliso wawucwangcisiwe kwakhona, kwaye wongeza izixhobo zemveliso ezenzekelayo, wazisa inkqubo yolawulo lwe-ISO, elungele ukukhonza abathengi ngcono.
Ngo-2021, ukucwangciswa kwefektri kuya kugqitywa kwaye kwandiswe ngokuzinzileyo. Ulawulo olusemgangathweni lwenkqubo yemveliso kunye nezixhobo ezizenzekelayo ziya kwandisa amandla emveliso. Ngokomthamo wentengiso, isicwangciso asonyusi kuphela iqela lenkonzo yokuqala yeqela lenkonzo yabathengi, kodwa longeza amaqela eeprojekthi. Ngelixa sisebenzela abavelisi beminyango kunye nabasasazi bayo, inokuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno zeekhontraktha. U-YALIS uza kuthatha inyathelo elikhulu ukuya phambili ngo-2021.